Redmi tsy ho ela dia handefa ny smartwatch | Androidsis
Ity herinandro ity ihany Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny Xiaomi Mi Watch, famantaranandro voalohany an'ny marika sinoa. Famantaranandro izay mampiasa ny Wear OS ho toy ny rafitra miasa ary mety ho fampiroboroboana ity rafitra miasa ity. Ny marika dia manana drafitra mazava momba ity sehatry ny akanjo ity. Satria afaka manao izany koa isika manantena famantaranandro avy any Redmi.
Tsy mbola nomena daty izao, fa ny Redmi Watch dia eo am-pivoarana izao. Fandefasana iray izay tsy isalasalana fa ho mahaliana indrindra ho an'ny mpampiasa, satria ny marika dia mamela antsika modely misy vidiny namboarina, izay azo antoka fa manampy amin'ny varotra tsara.
Redmi Watch no anarany, izay toa voamarina. Antenaina fa ho tonga amin'ny volana ho avy izy io, na dia mistery aza ireo daty nanombohana azy teny an-tsena. Tsy nisy antsipiriany nomena momba izay azontsika antenaina amin'ity famantaranandro ity amin'ny resaka specs ihany koa.
Raha heverintsika fa mamela antsika maodely amin'ny ankapobeny ity marika ity miaraka amin'ny vidiny ambany noho XiaomiAzontsika atao ny manantena fa ity smartwatch ity dia hanana vidiny mora azo kokoa noho ny Xiaomi Mi Watch, izay midika fa mety ho maotina kokoa izany amin'ny resaka famaritana.
Tsy maintsy miandry isika rehefa mandeha ny herinandro mandra-pahafantatra bebe kokoa momba an'ity Redmi Watch ity, fa toa efa eo am-pivoarana sahady ny famataranandro. Ka mety ho alohan'ny faran'ity taona ity dia ho lasa ofisialy ihany amin'ny farany. Na dia mbola tsy manome famantarana aza ny orinasa.
Mitombo hatrany ny tsena entina mitafy, Xiaomi dia iray amin'ireo marika amidy indrindra amin'ity sehatra ity. Ny Redmi Watch dia afaka manampy ny orinasa hanamafy ny toerana misy azy eo amin'ity sehatry ny tsena ity. Hanaraka ny vaovao momba an'ity famantaranandro ity izahay amin'ny fahalianana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Redmi koa dia miasa amin'ny rindrambaiko manokana